Pure Garcinia Cambogia Extracts Weight Loss Diet Supplement Burn Fat ( 85% HCA ) - 1 Pack gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
NET WT: 3 xirmooyinka guud
Number Model: Cambogia Pure Garcinia Cunsurka
Cambogia-ga Garcinia oo ah xayawaan / xayawaan cunto oo adag.
Waxay u shaqeysaa iyada oo aan laheyn waxyeelo, sida cunto xumo, af qallalan, hurdo la'aan, iwm.
Talo soo jeedin: Kiniinada 1-2 / waqti, 2 jeer / maalin. Alcohol, kuleyl, basbaas, cunto saliid leh.
Jeex bacaha, ka soo qaad galka xakamaynta.
Ku dhaji boogta isku dhejisan ee qaybta aad rabto in aad dharbaaxo, ka dibna ku dhejiso adhaas.
Hal jajab maalin kasta, codsi dibadeed oo joogta ah saacadaha 8-10 iyo guud ahaan koorso hal bil ah. Xitaa natiijada wanaagsan waxay isku daydaa koorso laba bilood ah.
Waxaa habboon in la isticmaalo dhirta Cambogia ee Garcinia.
Baruurta caloosha yar
Maqnaanshaha xad dhaafka ah
Wax soo saarka baruurta
Kordhinta dheef-shiid kiimikaad
Kordhinta xoogga iyo tamarta
Wax saameyn ah ma leh
Maaddooyinka saafiga ah ee ugu sarraysa